Established in 1913, Portland Holdings Ltd, which trades as PPC Zimbabwe, is the country’s largest and oldest cement manufacturer. Capable of producing up to 1.8 million tons of cement per annum, we supply quality cement to customers in Zimbabwe, as well as Botswana, Zambia and Mozambique.
For over 100 years, PPC Zimbabwe has produced cement for many of Zimbabwe’s most famous landmarks such as Victoria Falls, Kariba Dam, Harare International Airport, the NRZ Building, Lake Mutirikwi and many construction projects. As a local producer, PPC Zimbabwe is proud to be making a positive contribution to the people of Zimbabwe through employment, enterprise development and community support and has remained the leading producer in Zimbabwe since its inception more than a century ago. PPC will continue to support Zimbabwe’s infrastructural industry and community growth.
PPC Zimbabwe's operations produce quality cement for customers in Zimbabwe and other parts of Africa through exports. There are two PPC plants in Zimbabwe, Colleen Bawn and Bulawayo. These are among the most modern in Southern Africa and well located to serve both the Zimbabwean and neighbouring export markets such as Zambia and Mozambique. To keep up with the cement demand in Zimbabwe, A PPC plant is currently under construction in Harare to create more convenience for our consumers and better service the growth of Zimbabwe. This factory will be ready in the second quarter of 2016.
To strengthen our position as the cement industry leader in our geographical markets
PPC Zimbabwe currently operates in central SADC, an area of emerging markets. As these markets develop, so we stand poised to grow and expand, setting ourselves the target of becoming the preferred source of cement and cement products in the region.
Emerging markets continually present new opportunities, higher growth in populations, GDP and cement demand, and deliver higher returns for producers of cement and related products.